Sales & Services - Shanghai lakhuphuka Co., Ltd
Isakhiwo & Ukhonkolo
400 Service kwamakhasimende izikhungo
400 kwamakhasimende izikhungo zethu zihlukaniswe Imininingwane yokuxhumana izikhungo, kugxile ukuze sithuthukise ukwaneliseka ikhasimende, ukuziphatha kwamakhasimende ukuhlaziywa izikhungo, futhi umkhiqizo marketing izikhungo, okuyinto ukukunikeza Imisebenzi eprofetjhinali kufaka phakathi ulwazi sesevisi, intengo kokuthintana, technical support, umkhiqizo izikhalazo, ukulungiswa kanye izingxenye ezisele imibuzo, futhi yokuthengisa support.
Umuzwa womsebenzisi Day
Emini isipiliyoni umsebenzisi sizinika isikhathi ukwethula ngokugcwele imikhiqizo emisha futhi afeze esisebenzayo ikhasimende isipiliyoni imisebenzi, ukukusiza uqonde XCMG kangcono, futhi ikunikeze yangasese ngezifiso ukwakhiwa izixazululo.
Uhlelo Golden Operator Training
Sifuna neqhaza ekuqeqesheni ezivelele umkhakha ochwepheshe, ngakho sakha ngentshiseko base ukuqeqeshwa opharetha, axhase National Ukuphakamisa Amakhono Umncintiswano futhi Ukhonkolo Design Competition, futhi ukugqugquzela ukusebenzisana nezinkampani ukwakhiwa.
Private ngokwezifiso Ukwakhiwa Solutions
Sinazo software kanye hardware imithombo kanye neminyaka ukwakhiwa nakho okudingekayo ukukunikeza kahle futhi egcizelele kakhulu ukwakhiwa izixazululo. Sizokwenza ngenjabulo ukulalela noma iyiphi umklamo wakho umkhiqizo, izimboni, amapulazi akhiqiza noma isevisi imibono ngesikhathi inqubo yokubonisana.
Isidingo ukwakhiwa umahluko njalo lapho, futhi thina konke okusemandleni ukusiza ukuba ukhethe imishini esifanele futhi ukubaluleka kosizo kahle imishini uthenge.
One-stop Usizo lwezezimali
Ngokusekelwe ulwazi olujulile ubunjiniyela imikhiqizo imishini kanye nezidingo zamakhasimende, sisebenza izikhungo ezinkulu zezimali ukuhlinzeka ibhizinisi lakho ngezisusa ngezimali izixazululo.
Ukuze kuhlangatshezwane zonke izidingo zakho, sinikeza professional service zokuthutha ukulethwa kanye kuqeqeshwe ukufakwa kokuqala nge zonke ucezu imishini.
365 × 24 Unyaka wonke Izikhungo
Emhlabeni jikelele, sinalo ezingaphezu kuka-5000 inkonzo onjiniyela kanye 1500 izimoto enkonzweni yokuzinikezela. Sizimisele unyaka wonke angu-24 inkonzo ngisho ngamaholide, nomgomo wethu njalo nokunikeza "impendulo emizuzwini engu-15 futhi umsebenzi wokuqedwa emahoreni angu-24."
Smart Butler Izikhungo
Sesisungule esiphelele GPS Global Service Centre, futhi ngeke sikwazi ukukunikeza mathupha smart inceku uhlelo ngokusebenzisa i-Inthanethi platform Izinto.
Izingxenye elingasebenzi Uma kudingeka Them
Sinezinkulungwane zama izingxenye ezisele kugxile lokunqamula amazwekazi ezinhlanu isitokwe cishe 1 bhiliyoni Uchwepheshe izingxenye ezisele. Siyathembisa ukuthi izingxenye ezisele izothunyelwa emahoreni angama-72.
Ngemva-emakethe Izikhungo Ukukhathazeka-free
Sizibophozele ukuhlinzeka emva-emakethe amasevisi, kufaka phakathi ukuqashiswa, lesibili ngesandla imoto okuhlaziya, ukuhweba-ins, overhauls, futhi kabusha. Sihlala unamathele umthwalo wethu kanye mission of handling ukukhathazeka kwakho ngendlela esingakghona ngayo.
VIP Club Customer
Sine "ikhasimende-uchwepheshe-factory ukwakhiwa" emine indlela ukubambisana kanye exchange platform, ne uhlelo lokuphathwa umsindo kanye nomsebenzi ukugeleza.
Angu-24 i-hotline: 0086-13916689101
Uphonsa us A LINE!
© 2015 Shanghai lakhuphuka Electronic & Mechanical Equipment Co., Ltd. All Right agodliwe